Akụkọ - Ahịa biya nka n'okpuru ọrịa na usoro mgbochi nke ụlọ ọrụ anyị mere
Ahịa biya nka nka n'okpuru ọrịa na usoro mgbochi nke ụlọ ọrụ anyị mere
Kemgbe ọnwa Jenụwarị nke afọ a, ọrịa a na-efe efe agbasala ma mechie ụlọ ahịa, ụlọ mmanya, ụlọ nri na ebe ọha. Ka ọ dị ugbu a, ọrịa ahụ adịla ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara afọ, nke butere ndakpọ akụ na ụba ụwa na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke enweghị ọrụ; Na mgbakwunye na ahịa mba ụwa ndị ọzọ adịghị enwe nchekwube n'ihi ihe ndị mba ụwa; Site na mgbasa nke ọrịa na-efe efe, ọtụtụ ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ebe a na-emepụta ihe, wdg. akwụsịla ọrụ, wdg. Mfu ndị ụlọ ọrụ biya nka kpatara na-enweghị atụ; nke a ebutela mmụba mberede na ire akụrụngwa biya nka. Iji belata mmetụta nke ọrịa na-efe efe, ụlọ ọrụ anyị emelitere usoro usoro, dị ka ndị a:
1. Nkwalite ngwaahịa iji melite ogo akụrụngwa biya na uru akụrụngwa agbakwunyere; ndị injinia anyị na-etinye ihe ndị ahịa chọrọ n'ịrụpụta akụrụngwa imepụta ihe, ka ndị ahịa wee nwee ahụmịhe ka mma;
2. Hazie weebụsaịtị wee gosi ndị ahịa anyị ngwaahịa kacha mma;
3. Zụlite ndị injinia anyị na-ere ahịa ka ha na-ejere ndị ahịa ozi ka mma;
4. Belata ọnụ ahịa ngwá ọrụ iji ree nkwado ndị ahịa ka ha malite azụmahịa ime biya ozugbo enwere ike, ma belata ọnụahịa na ndabere nke nkwalite ngwaahịa ngwaahịa;
5. Meziwanye usoro nke ụlọ ọrụ ahụ;
Olileanya na anyị ga-aka mma ma na-ejere ọtụtụ ndị ahịa ozi;
N'ịgwọ ahụike, egosila na ịṅụ oke mmanya nwere ike ime ka ahụ mmadụ nwee ezi ahụ ike. Huaian na-ebelata cholesterol, na-ewusi ọgụgụ isi ike, ma na-akpali mmụọ. Ọ bụrụ na Zhang bụ onye toro eto toruola afọ ịṅụ mmanya nke iwu kwadoro ma na-enwe mmasị na-aṅụ otu iko mmanya Pinot Noir kwa abalị, Zhang kwesịrị inwe ike ịghọta mmetụta dị egwu nke ịṅụbiga mmanya ókè. Agbanyeghị, ọ bụrụ na Zhang nwere mmasị ị drinkụ mmanya, mgbe ahụ Zhang nwere ike ọ gaghị enwe ohere ịṅụ mmanya nke ọma. Ka anyị leba anya n’uru ọn̄ụ mmanya na-aba n’anya n’ahụ mmadụ. Dumens Asia Beer Academy.
Mmepe na-aga n'ihu nke teknụzụ ime biya nke ọgbara ọhụrụ na-enye ohere dị ukwuu maka imeju mmasị dị iche iche nke ndị na-azụ ahịa na ihe ndị na-adịghị mma. Ka ọ dị ugbu a, na mmụba na-enweghị njedebe na mmepe nke mgbanwe na imeghe, mmanya gbara ọchịchịrị na-adọrọ mmasị abanyela ngwa ngwa n'ahịa obodo Chen Mou, ọ na-aghọwanye ihe na-eme ka ndị mmadụ gbanarị ndụ nke oge a.